ABEZEMPILO BATHEMBISA UKULWISANA NEGCIWANE I-CORONAVIRUS – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe WezeMpilo uDkt Zweli Mkhize uvakashele umphakathi waseMgungundlovu ukuzowucacisela ngegciwane i-Coronavirus.
UNgqongqoshe WeZempilo kuleli uDkt Zweli Mkhize uqinisekise ukuthi uMnyango WezeMpilo uzama konke okusemandleni ukunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane elibizwa nge-Coronavirus (Covid19) elihlalise iNingizimu Afrika yonke ovalweni.
Ukusho lokhu ngesikhathi evakashele eMgungundlovu e-City Hall emva kokuba kutholakale umuntu wokuqala onalo endaweni yase-Hilton obekade evakashele e-Italy. Kuxwayiswe abantu ngaleli gciwane ezinkundleni zokuxhumana kanye nasezindabeni ukuze basheshe bazivikele kusona singakabhebhetheki.
UMkhize uchaze leli gciwane njenge gciwane eliphelayo njengoba kuyigciwane elisuke ezilwaneni langena kubantu, aphinde washo nokuthi uma uthole ukwelashwa kahle liyaphela emzimbeni. Ube esenxusa ukuba abantu behlise amaphaphu basebenzise lezi zindlela abalulekwe ukuba bazisebenzise ukuze bazivikele.
“Abantu bayacelwa ukuthi bazame ukuzivikela ngokusebenzisa lezi zindlela abangazivikela ngazo ezifana nokuqinisekisa ukuthi uyaziwasha njalo izandla ngamanzi ahlanzekile nensipho, ungathinti amehlo, amakhala nomlomo ngezandla ezingahlanzekile, ukuvala umlomo ngethishu bese uyayilahla uwashe nezandla, ukusula zonke izinto ojwayele ukuzisebenzisa njengo makhalekhukhwini wakho,” kuchaza uMkhize.
Uqhube wathi, “Okwamanje akekho noyedwa umuntu wakuleli osendaweni yase-China otholwe enalesi sifo kulabo obekuthiwa bazobuya nosekudale umsindo ezinkundleni zokuxhumana abantu bethi bazofika nalesi sifo.”
“Uma sebebuya labantu abalandwa e-China kuzoba nohlelo oluhlukaniswe kathathu kanti kulona kunohlelo oluzoqinisekisa ukuthi bahloliwe njengoba bezohlala isikhathi esingangezinsuku ezingama-21 behlolisiswa ukuthi abanalo ngempela yini leli gciwane ebese bebuyela emndenini yabo,” kuqhuba uMkhize.